Muxuu ka yiri Mikel Arteta guuldarradii ay kala kulmeen kooxda Liverpool?? – Gool FM
(London) 29 Sebt 2020. Mikel Arteta ayaa amaanay waxqabadka kooxda kubadda cagta Liverpool, taas oo ku hoggaamisay inay guul xiisa badan ka gaarto naadiga Arsenal.
Macalinka reer Spain ayaa ciyaarta kaddib wareysi uu bixiyay wuxuu ku ammaanay kooxda Liverpool, wuxuuna yiri:
“Waxay xakameeyeen dhinac walba oo ciyaarta ka mid ah”.
“Horumarka ciyaarta waxay na gelisay xaalad aad u xoogan, si aan u aamino inaan wax uun ka heli karno ciyaarta”.
“Qeybtii labaad, waxaan saxnay waxyaabo qaar, aad ayaan u fiicneyn, dhibaatooyin ayaan kala kulanay, waxaana helnay fursadii ugu fiicneyd ee ciyaarta, marka aad timaaddo Anfield, mahelaysid 10 fursadood”.
Intaas kaddib Mikel Arteta ayaa ka hadlay labadii fursadood uu Alexandre Lacazette ka qasaariyay kooxdiisa Arsenal qeybtii labaad ee ciyaarta, wuxuuna yiri:
“Marka aad ku jirto xaalad qof qof ah oo goolhaayaha hortiisa ah, waa inaad dhalisaa haddii aad rabto inaad wax ka hesho ciyaarta”.
Si kastaba ha noqotee, saddexda gool ee kooxda Liverpool waxaa u kala dhaliyay Sadio Mané, Andy Robertson, iyo Diogo Jota, halka goolka kaliya ee Arsenal uu u dhaliyay Alexandre Lacazette.
Frank Lampard oo si cad u sheegay xiddig ay muhiim tahay inuu isaga tago kooxda Chelsea